I-Spirit Buer Magic Lapel Pin yeReiki kanye ne-Holistic Healing - World of Amulets
I-Spirit Buer Magic Lapel Pin yeReiki ne-Holistic Healing
Kusele izinto eziyi-96
Ubuningi I-Zamac + Enamel
I-Zamac + Enamel
IBuer isetshenziselwa ukwelapha, ifilosofi yokuziphatha, okunengqondo kanye nemvelo futhi ingasetshenziswa ukulwa notshwala.
Umakhi welapha zonke izifo, futhi ufundisa isimilo, imvelo, kanye nefilosofi enengqondo. Akakhuthazi ukudakwa. Ufundisa nezakhiwo zawo wonke amakhambi nezitshalo.
Kusuka kumhloli wethu uLetyi:
Njengamanje ngisanda kuqeda ukuhlolwa kwephini leLapel leBuer. Lokhu okunye ukutholwa okungakholeki. Hhayi kangako ukuzelapha kepha ukuheha amaklayenti amaningi, iningi lawo. Phakathi namasonto e-2 wokugcina ngithole amaklayenti amasha amaningi kunezinyanga ezi-2 ezedlule. Futhi bekulula kakhulu ... Ngimane ngigqoke iphini ngiphume ngiyohambahamba noma ngihlangane nabangane, ngibe nokuthile ethangeni nokunye. Lapho abantu bebona iphini, bavele basondele kimi futhi ngokuvamile basho okuthile okufana nokuthi; Angikwazanga ukusiza ukuqaphela le-lapel pin, iyini? Noma ngiyafuna ukwazi, uyithathephi leyo phini, ingabe iphini elinjani? Futhi ngidonselwe kuwe, le phini oyigqokile ikhetheke kakhulu, ngingayitholaphi?
Lokhu kunginike ithuba lokutshela abantu ngezinsizakalo zami zokuphulukisa futhi iningi labo libhuka isikhathi. Nginesiqiniseko sokuthi kungenxa yamandla ale phini. Angikhathali ukuthi amandla ayo ayaphela ngemuva kwezinyanga eziyi-9, ngizovele ngithole enye. Le phini inginikeza ithuba lokusiza abantu abaningi ngokuphulukiswa kwami. funda i-athikili ephelele lapha
Le yindlela entsha yokusebenza ngomlingo. Le phini ye-lapel ingasetshenziswa yiwo wonke umuntu. Kuzoheha konke okudingayo ukuvele ukugqoke endaweni ebonakalayo yezingubo zakho njengejakhethi, isikibha, ijezi, isigqoko, njalonjalo. Le phini izodonsa ukunaka kwawo wonke umuntu kodwa okubaluleke kakhulu izodonsa labo bantu obadingayo ngezifiso zakho.
Isebenza kanjani ncamashi?
Ngokuphambene nezintelezi nezindandatho ezisebenza ngamandla akho nomoya wakho, izikhonkwane zebhekhoni zisebenza ngamandla abanye abantu. Lapho abantu behlangana nawe futhi bebona iphini, ukunakwa kwabo kudonswa kuye. Ngaleso sikhathi amandla ephini anquma ukuthi ngabe lo muntu uyadingeka yini ukuqedela isifiso sakho. Uma kungenjalo, lo muntu ngeke ahlanganyele nawe. Uma impendulo inguyebo, usanda kuthola usizo olukhulu. Lo muntu uzokunikeza usizo, imininingwane, njll. Udinga kulowo mzuzu ukuze uthuthuke ufinyelele enhlosweni yakho, isifiso noma isifiso sakho. Cabanga ngakho njengokudinga ukunyathela amatshe emgwaqeni.
Iphini alisoze laphikisana nentando yomunye umuntu kepha lizokwenza lowo muntu azi ngezidingo zakho namathuba akhe wokukusiza. Amandla avela kuphini uzokuvula izingqondo nezinhliziyo zabanye abantu abasesimweni esihle bakusize.
Imiphumela yephini icishe ibe khona ngokushesha. Lapho nje othile ebona iphini, isenzo singumphumela.
lapho ugqoka kakhulu iphini, kuba lula ukuthola imiphumela ngemuva kwemiphumela. Okuwukuphela kwento ebuyayo ukuthi amandla ephini anqunyelwe ngesikhathi. Lapho uwudalula kakhulu kwabanye abantu, ngokushesha lapho amandla ayo eba namandla. Ezimweni ezijwayelekile amandla ayo ahlala cishe ezinyangeni eziyi-9 kuya onyakeni owodwa. Ngemuva kwalokho kuzoba yiphini elihle nje elingenamandla omlingo.
Ayikwazi ukukhokhiswa kabusha noma iqondaniswe kabusha
Iphini ubukhulu: 25mm eyenziwe nge-zamak noqweqwe lwawo lwekhwalithi ephezulu
Zonke izikhonkwane zikhokhiswa ngamandla emimoya